Yisiphi isici esikhathazayo kakhulu se-barbecue yangaphandle?
I-Barbecue ingenye yezindlela zabantu abazithandayo zephathi nokuzijabulisa. Abantu bangakha ibarbecue engaphandle engadini yabo noma babeke indawo yokubaza engaphandle endle. Kepha ukuhlela kahle isosoji sangaphandle, kunezinto eziningi okufanele zibhekwe. Kufanele uhlole imininingwane yezulu ...
Yiziphi izinzuzo zezihlalo zolwandle?
Ngaphandle kwezihlalo zolwandle, abantu bangakujabulela kanjani ukukhanya kwelanga kanye nolwandle? Ukuze unikeze umuzwa wokududuzeka, ukwakheka kwesihlalo solwandle kuncike emgomweni wokuvumelanisa ijika lomzimba womuntu kanye nezinto zalo ezibonakalayo, kugcizelela nobushelelezi besakhiwo sonke nokugeleza okukhona ...
Yini imaski etholakala njengamanje ngokumelene ne-coronavirus
1.Amamaski wokulwa angakwazi ukumelana noveli we-coronavirus Olahliwe 3 Isendlalelo Esingelolwanga Ubuso Bomsizi: Kungasiza ukuhlinzeka ngokuvikela ngokwengxenye ezifweni zokuphefumula ngezinga elithile, kodwa ngeke kuvikele inkungu noma ihele. Imaski yobuso eqinisekisiwe yeN95: Akunakusiza kuphela ukunikeza ukuvikelwa kusuka ...